Hex Head မိမိကိုယ်ကိုအသာပုတ်ခြင်း၊ Drywall ဝက်အူ၊ Wood Wood - DD
Hex Head အနားကွပ်အလိုအလျောက်အသာပုတ်ပါ
ဖော်ပြချက်အညွှန်း Hex Head အနားကွပ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထိုးခြင်းဝက်အူအမှတ်တံဆိပ် DD စွဲမြဲစေရန် DIN / GB / ANSI / BS FOB စျေးနှုန်း $ 0.01 ~ $ 0.08 / piece ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T ပစ္စည်းသံမဏိ / ကာဗွန်သံမဏိအပြီးသတ် Znic Plated / Blue အဖြူရောင်သွပ် Lenth 13mm ~ 350mm Supply စွမ်းရည်ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်တစ်လလျှင်တန် ၅၀၀၀ တန် OEM ၀ န်ဆောင်မှုဟုတ်ပါသည် Min.Order အရေအတွက် ၁ တန် / တန်ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်အိတ်များ / သေတ္တာများ၊ pallet Port Tianjin / Qingdao
ဖော်ပြချက်အမည် Anti-Corrosion Hex Head သစ်သားဝက်အူအမှတ်တံဆိပ် DD စွဲစေသည့်စံ DIN / GB / ANSI / BS FOB စျေးနှုန်း $ 0.01 ~ $ 0.08 / piece ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T ပစ္စည်းသံမဏိ / ကာဗွန်သံမဏိအပြီးသတ် Znic Plated / အဖြူရောင်အဖြူရောင်သွပ် Lenth 13mm ~ 350mm ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်တစ်လလျှင်တန် ၅၀၀၀ တန် OEM ၀ န်ဆောင်မှုဟုတ်ပါသည် Min.Order အရေအတွက် ၁ တန် / တန်ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်အိတ်များ / သေတ္တာများ၊ pallet Port Tianjin / Qingdao
Drywall ဝက်အူ (အပြာနှင့်အဖြူ)
ဖော်ပြချက်အမည် Drywall ဝက်အူ (အပြာနှင့်အဖြူ) ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် DD စွဲစေစံ DIN / GB / ANSI / BS FOB စျေးနှုန်း $ 0.01 ~ $ 0.08 / piece ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T ပစ္စည်းသံမဏိ / ကာဗွန်သံမဏိအပြီးသတ် Znic Plated / အပြာရောင်အဖြူရောင်သွပ် Lenth 13mm ~ 350mm ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်တစ်လလျှင်တန် ၅၀၀၀ တန် OEM ၀ န်ဆောင်မှုဟုတ်ပါသည် Min.Order အရေအတွက် ၁ တန် / တန်လေးထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်အိတ်များ / သေတ္တာများ၊ pallet ဆိပ်ကမ်း Tianjin / Qingdao
Phillips CSK ဦး ခေါင်း Chipboard ဝက်အူ
ဖော်ပြချက်အမည် Phillips CSK headboard Chipboard Screw Brand DD စွဲမြဲစေရန် DIN / GB / ANSI / BS FOB စျေးနှုန်း $ 0.01 ~ $ 0.08 / piece ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T ပစ္စည်းသံမဏိ / ကာဗွန်သံမဏိအပြီးသတ် Znic Plated / Blue white zinc, Lenth 13mm ~ 350mm Supply စွမ်းရည်ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်တစ်လလျှင်တန် ၅၀၀၀ တန် OEM ၀ န်ဆောင်မှုဟုတ်ပါသည် Min.Order ပမာဏ ၁ တန် / တန်စာထုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်အိတ်များ / သေတ္တာများ၊ pallet ဆိပ်ကမ်း Tianjin / Qingdao
ကျနော်တို့ပစ္စည်းအားလုံးထိုင်ဝမ်သို့မဟုတ် Gemany မှတင်သွင်း။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြည့်စုံသောသိပ္ပံနည်းကျအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ကျွမ်းကျင်သော R&D အဖွဲ့နှင့်နည်းပညာစာရေးတို့လည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်မီအဆင့်မြင့်စံချိန်စံညွှန်းကြီးမားသောအမျိုးမျိုးသောပြည့်စုံသောစွဲစေသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုမှာတန်ချိန် ၅၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်အဖြစ်အမြဲထားခဲ့ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။
screw နှစ်ခုနှင့် bolt များအကြားခြားနားချက်နှင့် screw နှင့် bolts အကြားလုပ်ဆောင်မှုကွာခြားချက်
သော့များနှင့် screw နှစ်ခုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုရှိသည်။ ၁။ အခွံမာသီးများနှင့် တွဲဖက်၍ ယေဘုယျအားဖြင့် bolts ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဝက်အူကိုတိုက်ရိုက်ပြည်တွင်းချည်၏ matrix ကိုအပေါ်လွဲချော်သွားတာနိုင်ပါတယ်; ၂။ သော့ခလောက်များအားပြင်းထန်သောအကွာအဝေးဖြင့်ဝက်အူလှောင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ မင်းကြည့်လို့ရတယ် ...
အဘို့သင့်လျော်သော screw နှစ်ခုဘာတွေလဲ?
ဝက်အူကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ဝက်အူသည်ငါတို့ဘုံစွဲစေခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအောက်ပါနယ်ပယ်လေးခုတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၁။ သံမဏိပြားများ၊ သတ္တုပြားများ၊ 2. သတ္တုကုလားကာနံရံသတ္တုအလင်းအခန်းနှင့်အခြားမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတပ်ဆင်ခြင်း။ ၃ ။
Self drilling screw သည်စက်မှုအခြေခံအခြေပြုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သို့မဟုတ်အပူချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဆိုးသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ငန်းခွင်၏လွှမ်းမိုးမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုအပ်သောကြောင့်သော့များ၊ ဝက်အူများ၊ အသုံးများသောပစ္စည်းများမှာကာဗွန်သံမဏိဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိသည်စွဲစေသည့်အင်္ဂါရပ်များမြင့်မားသောခွန်အားနှင့်စွဲစေသည့်အရာများသည်အတန်းအစား ၈.၈၊ ၉.၈၊ ၁၀.၉၊ မြင့်မားသောခွန်အားစွဲစေသည့်စွဲစေနိုင်မှုသည်မြင့်မားသောမာကျောမှု၊ ကောင်းသောဆန့်စွမ်းဆောင်ရည်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်မှု၊ မြင့်မားသောဆက်သွယ်မှုတောင့်တင်းခြင်း၊
Senco DS225-18V Duraspin Auto-Feed ဝက်အူယာဉ်မောင်းလက်ကမ်းစာစောင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Senco DS225-18V Duraspin Auto-Feed Screw Driver သည်သင်၏အမြန်နှုန်းကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောကိရိယာတစ်ခု၏အမြန်နှုန်းမြင့်စွဲကပ်နေသောသားရဲတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အသွားအပြန်ကောင်းသည့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်သင်၏နောက်ထပ် drywall သို့မဟုတ် subfloor အလုပ်ကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ Senco Duraspin DS225-18V Durasping Au နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ ...